Sidee loo Noqdaa RHCE Shahaadada?
Hawlaha Lagu Helo RHCE
RHCE Audience: Goorma ayay tahay inaad u tagto?
Maxaad Ka Qaadan Kartaa Ka Dib Markaad Noqon Karto RHCE?
Shahaadada RHCE (Engineer Red Hat Certified Engineer) waa midka ugu habboon ee la codsaday shahaadooyinka caalamka. RHCE-du waa asaas ahaan Maamulaha Agaasimayaasha Red Hat Certified System (RHCSA) kaas oo leh awood dheeri ah iyo dabeecado loo baahan yahay si loo daboolo nidaam sare oo ah hannaanka sare. RHCE-da waxay xaqiijisay in ay ku fiicneyn in ay kormeeraan oo ay ka shaqeeyaan nidaamyada Red Hat Enterprise Linux kuwaas oo aasaas u ah nidaamka kala qaybinta Linux ee uu abuuray Red Hat. Nidaamkani waa lacag la'aan oo furan hadda. Waa sida tan oo kale oo aan la yaabin in helitaanka shahaadada RHCE loo arko inay tahay meel isbadal ah oo ay qabatay khabiiro IT ah. Fikradaha xirfadlaha ah waa kuwo damaanadqaadaya oo dhammeystiran. In kasta oo xaqiiqda ah, in la helo RHCE-ga la hubiyay in uu yahay RHCSA oo la hubo marka hore. Sidee loo noqon karaa RHCE-da?
Ka hor inta aanad helin shahaadada RHCE, mid waa inuu noqdaa inuu noqdo RHCSA xaqiijiyay. Tababarka la qorey wuxuu mas'uul ka yahay xirmooyinkaaga hadda jira. Kuwani Windows waxay maamushaa kuwa haysta khibradaha Linux si ay u aadaan koorsooyinka Red Hat System Administration I iyo II (RH124 iyo RH134) iyo koorasyada Red Hat System III (RH254) si loogu diyaariyo baaritaanka. Haddii aysan dhibaato badani ka dhaxaynin dhibbaneyaasha hoose:
Maamulayaasha nidaamka Windows kuwaas oo haysta kulan yar oo Linux ah:
Maamulka Khadka Bannaanka ee Red Hat I (RH124)
Maamulka Khadka Bannaanka ee Red Hat II (RH134)
Red Hat Maamulka Nidaamka III (RH254)
Linux ama UNIX kormeerayaasha kuwaas oo ku hareereysan 1 illaa 3 khibradihii:
RHCSA Kursi degdeg ah (RH199)
Waxaad dejin kartaa nooc kasta oo tababar ah kaas oo kugu soo biiraya sida - fasalka, webka, ama boggaaga internetka. Waxaa jira aasaaso badan oo bixiya koorsooyinka tababarka RHCSA iyo heerarka kale ee lagu guuleysto.
RHCSA waxay xaqiijiyeen khabiiro doonaya inay yeeshaan heer karti heer sare ah ee maskaxda ku haya ujeedada ugu dambeysa ee ah inay xirfadahooda ku soo ceshadaan waa inay keenaan shahaadada RHCE-da. Sidoo kale waxaad heli kartaa RHCE-da hubinaysa haddii aad tahay hogaamiye sare oo dhamaystiran, hase yeeshee wali lama xaqiijin. Intaa waxaa dheer, marka aad fursad u haysato inaad dhameysato RHCE Tracking Course ama shakhsiyaadka soo dhammaystay Maamulka Nidaamka I, II, iyo III.
Si loo dhameeyo shahaadada RHCE, mid waa inuu ka gudbaa imtixaanka saacadda 3.5 RHCE (EX300) ee aragtida Linux 7. Fursada ka baxsan in RHCE-du ay xaqiijiso inay u baahan tahay inay dib u soo ceshato ama fursad ay qofku rabto in ay kaqaybqaataan sahan-ku-saleysan ka hor intaysan qaadan imtixaanka RHCE, waa inaad u tagtaa RHCE Certification Lab (RH299). Tani waa qaab dhismeed afar maalin ah oo ay wadato macalin kaas oo aad ka heshay nasashada si aad uga shaqeyso mid kasta oo ka mid ah shaybaarada laga bilaabo Kulliyadda Nidaamka Nidaamyada Red Hat System I, II iyo III, oo ay weheliso koorsada Rapid Track.
Sida ay muujisay Red Hat, maaddaama ay tahay muhiimadda koowaad ee RHCE-du waxay lahaan doontaa waxa ay ka qaadato aqoonta RHCSA ee aqoonta leh. Si kastaba ha ahaatee, waxay lahaan lahaayeen karti ay ku sameeyn karaan xayeysiin runtime ah; samee koorsooyin xisaabeed, xirmo xirmo, iyo qabanqaabinta turjubaanka cinwaanka; abuurista iyo gudbinta siinayaa xisaabin isticmaalka nidaamka; naqshadeynta naqshadeynta naqshadaynta, oo ay ku jiraan qorista fog samee qorshe (iSCSI) bilaabida; Isticmaalidda qoraalka qolofka si loo maareeyo nidaamka taageerada nidaamka iyo naqshadeynta nidaam si loo siiyo maamulo maamul sida HTTP / HTTPS, FTP, NFS, SMB iyo wixii la mid ah.
Qeybahaasi waa inay ahaadaan RHCSA oo la hubiyo ka hor inta aan la ogaanin RHCE-da shahaadooyinka RHCSA iyo koorsooyinka tababarka RHCSA ee isku-duwaya si loo dhiso sababo awoodeed oo la filayo inay ka shaqeeyaan dhammaan Red Hat items. Si loo helo RHCE-da waxay xaqiijineysaa natiijooyinka xirfadaha iyo xirfad-yaqaanka xirfadaha awooda. In kasta oo xaqiiqda ah, waa in aad qaadato ka dib qaabsocodka lagu caddeeyay Red Hat si loo helo shahaadada. Waa inaad u gudubtaa dhowr imtixaan si aad u xoojisid is-ilaalintaada maskaxda ku haysa himilada ugu dambeysa si aad imtixaan uga qaadato shahaadada RHCE.